Somali daily News – Muqdisho Oo Lagu Wado Seddex Bil Gudaheeda In Isbadel Nabeed Lagu Sameeyo…….
Wasiirka Amniga Gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow (Ducaale) ayaa ka hadlay howgalka xasilinta Caasimada Muqdisho ay wadaan Ciidamada isku dhafka ah ee katirsan Nabad sugida, booliiska iyo Milatariga.
Waxa uu sheegay Wasiirka in la dhaqan galinayo go’aanadii kasoo baxay Xukuumada Soomaaliya ee ku aadanaa in magaalada aan lagu arki karin ciidamo hubeesan iyo hubka waa weyn, waxa uuna cadeeyay in tilaabo sharci ah laga qaadi doono cidii kahor timaada howlgalka xasilinta Caasimada.
Wasiirka Amniga ayaa sheegay in ay doonayaan in sedex bil gudahood magaalada Muqdisho looga dhigo mid amaan ah oo ka caagan hubka, waxa uuna tilmaamay in aysan marnaba ogolaan doonin gaari tikniko ah iyo ciidamo kuwa xasilinta aheen lagu dhax arko Muqdisho iyaga oon fasax heysan.
”Waxaa rabnaa magaalada Muqdisho sadexda bil ee soo socota in ay noqoto mid amaan ah oo hub lagu dhax wadin, hub iyo qoray waxba masoo kordhinayo waad aragtaan magalaooyinka Hargeysa iyo Garawe hub laguma wato waana amaan ” Ayuu yiri Wasiirka Amniga.
Wasiirka Amniga gudaha ayaa sheegay in Ciidamada xasilinta ay amar u qabaan in hubka ka dhigaan askarigii ama dadka kale hubeesan ee ku qabtaan magaalada Muqdisho fasax la’aan , waxa uuna cadeeyay in xabsiga la dhigi doono cidii hub lagu qabto.
Dowlada Soomaaliya ayaa soo saartay go’aano iyo awaamiir badan oo lagu xasilinayo amaanka magaalada Muqdisho, waxaana caasimada laga howlgaliyay ciidamo gaar ah oo loogu magac daray ciidanka Xasilinta caasimada kuwaa oo hub ka dhigis iyo sugitaanka amaanka isku dhax wada.